Iwu kagbuo (ọrụ) | Akwụkwọ edemede
Iwu kagbuo (ọrụ)
Ihe si na nkagbu: N'ihe banyere ịkagbu nke ọma, a ga-eweghachite ọrụ ndị natara na uru ọ bụla (dịka mmasị) nyefere. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ma ọ bụ na-enweghị ike ịlaghachi ma ọ bụ nyefee ọrụ nnata na uru (dịka uru ojiji) ma ọ bụ naanị na ọnọdụ na-adịghị mma, ị ga-akwụghachi anyị maka uru ahụ. Nke a nwere ike ịpụta na ị ga-ezute ụgwọ ịkwụ ụgwọ nkwekọrịta maka oge ahụ ruo nkwụsị. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ maka mmebi nke ihe ahụ na uru ọ bụla a dọtara ma ọ bụrụ na ojiji ma ọ bụ mmebi ahụ bụ maka njikwa nke ihe ahụ gafere nyocha nke akụrụngwa na arụmọrụ. “Inyocha ihe onwunwe na arụmọrụ” pụtara ịnwale ma nwalee ngwongwo dị iche iche, dịka ọ ga-ekwe omume na omenala na ụlọ ahịa. A ga-eweghachite ihe ndị nwere ike ibute na ihe ize ndụ anyị. You ga-akwụ ụgwọ oge niile maka ịlaghachi ngwongwo ma ọ bụrụ na ngwongwo a na-eweta kwekọrọ na ngwongwo enyere ma ọ bụrụ na ọnụahịa nke ngwaahịa a ga-eweghachi gafere karịa euro 40 ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnabatabeghị echiche ma ọ bụ emeela nkwekọrịta ahụ kwetara ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Ma ọ bụghị ya, nlọghachi ahụ bụ n'efu maka gị. Ihe ndị a na-enweghị ike izipu site na ngwugwu ga-anakọta gị. Ekwesiri ịkwụghachi ụgwọ ịkwụ ụgwọ n'ime ụbọchị 30. Oge ga-amalite maka gị mgbe ị zitere nkwupụta nke nwepu ma ọ bụ ngwongwo ahụ, maka anyị na nnata ha.
Ntụziaka pụrụ iche: Ikike gị ịhapụ oge gwụchara ma ọ bụrụ na nkwekọrịta ahụ emezuola kpamkpam site n'aka ndị abụọ na nkwupụta gị kwupụtara tupu ị gosipụtara ikike ịhapụ gị.
Ọgwụgwụ nke iwu nkwụsị
Biko rụba ama: Ikike ịkagbu anaghị emetụta na nkwekọrịta azụmaahịa dị anya maka nnyefe nke ngwongwo arụpụtara dịka nkọwa gị ma ọ bụ nke doro anya maka mkpa nke gị ma ọ bụ nke na-ekwesịghị ekwesị maka nloghachi n'ihi ọdịdị ha ma ọ bụ nke nwere ike imebi ngwa ngwa ma ọ bụ nke ụbọchị njedebe ya gafere. Ọzọkwa, enweghị nkwekọrịta dị anya maka nnyefe nke ọdịyo ma ọ bụ ndekọ vidiyo, ederede ma ọ bụ ngwanrọ, ma ọ bụrụhaala na ị kpughere ndị na-ebu data nyefere, maka ịnyefe akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ, belụsọ ma ị jiri ekwentị kwupụta nkwekọrịta gị. Ọzọkwa, ikike ịkagbu adịghị maka nkwekọrịta azụmaahịa dị anya nke a na-emechi n'ụdị ire ahịa (156 BGB) ma ọ bụ maka ịnye ọrụ ndị sitere na nkwukọrịta nke enyere site na ndị ahịa na-arịọ ya ozugbo site na ekwentị ma ọ bụ faksị, belụsọ na ọrụ ego metụtara ya.
Ikike ịkagbu anaghị emetụta ngwaahịa dijitalụ nke enwetara ma nyefee site na nbudata, 312 d para. 4 no. 1 BGB.
Nloghachi arịrịọ maka ngwongwo ndị na-enweghị ike izipu dị ka ngwugwu ga-emere anyị na ederede, na-akọwapụta ngwaahịa ndị enyere iwu, nọmba akwụkwọ ọnụahịa na adreesị gị. Ibu ihe akaebe maka nloghachi ahụ dị n'aka gị dị ka onye na-azụ ahịa.
Biko cheta itinye nọmba ọnụahịa, adres gị zuru oke yana nkọwa ụlọ akụ gị iji wee kwụghachi ụgwọ nkwụghachi gị.